Anyị na-ahụkarị ọmarịcha ihe oyiyi nke mbara igwe na ọdịdị, nke dị ka a ga-ewere ha site na onye ọkachamara ọkachamara na akụrụngwa dị oke ọnụ. Typedị foto a, nke a na-akpọ foto ikpughe ogologo oge, nwere ike nweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ụdị igwefoto ọ bụla, nke nwere ike ime ka ọbụna ihe ngosi dị nhịahụ mara mma. E nwere ụzọ dị iche iche iji mezuo ogbugba zuru oke, gụnyere ụdị akụrụngwa dị iche iche, dịka nzacha, tripods, na nke kachasị mkpa, ndidi.
Gini bu foto ekpughere ogologo?
Long ikpughe foto bụ Nchikota ọsọ ụgbọ ala, elekwasị anya, na ìhè. Ọ bụ otu n'ime ụdị foto kachasị ewu ewu na nsonaazụ dị ukwuu nwere ike ị nweta nke ọ bụla. Typedị foto a bụ ụdị nka dị mma, ebe onye na-ese foto ga-eji echiche ha wee were anya nke uche hụ ihe ahụ na otu ọ ga-adị. Ọ na-achọkwa ntakịrị ihe ọmụma banyere ntọala igwefoto na arụmọrụ, gụnyere nzacha na ịhazigharị ọsọ ọsọ.
N'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị bụ novice ma ọ bụ nwee ahụmahụ na-ese foto, nke a bụ ụzọ dị mma iji mepụta foto na-adọrọ adọrọ. O nwekwara ike ime ka ọbụna isiokwu kachasị dị mfe bụrụ ihe pụrụ iche, ma nwee ike ịme ka onye na-ese foto novice dị ka pro!
Tweak Ntọala Gị
Ọ bụ ezie na ụdị foto a dịtụ nfe, enwere ntọala igwefoto dị iche iche dị iche iche a ga-atụle iji nweta nsonaazụ ezubere. Akụkụ ụfọdụ dị ka ọsọ ihu na ntọhapụ ntọhapụ bụ ntụtụ nke nkedo zuru oke.
Ọsọ ihe na-agba ọsọ bụ oge ole kamera ahụ mepere emepe. Inweta ntọala mkpuchi dị mma dị oke mkpa maka ụdị foto a, ebe ọ ga-achịkwa etu ọkụ na ihe ndị ọzọ si eme. Agbanyeghị, ọ dị ezigbo mkpa ka ị ghara ịhapụ ihe mkpuchi ahụ ogologo oge, ebe enwere ike ịsefe foto ahụ. Ya mere, iji ntọala mkpuchi dị ala na-eme ka o doo anya na a gaghị egosipụta foto ahụ nke ọma na ogbugba ahụ dị ka ọkachamara. nzacha nke na-ahazi ogo ole ọkụ na-abanye na oghere nwere ike ime mgbanwe dị mkpa na ogbugba gị.
Nwee Ngwaọrụ Kwesịrị Ekwesị
Enwere akụrụngwa dịgasị iche iche iji melite agbapụ zuru oke. Nke kachasị mkpa, ọ dị mkpa ịnwe igwefoto na-akwụsi ike ma na-elekwasị anya nke ga-ebuli ikike nke foto na-egbuke egbuke. Ọzọkwa, ezigbo ọkụ dị ezigbo mkpa, yabụ ọ dị mkpa iji hụ na igwefoto gị nwere ọsọ ihu akwụkwọ na ntọala ISO. A tripod dịkwa oké mkpa, n'ihi na ọ ga-ahụ na igwefoto ga-akwụsi ike mgbe mkpuchi gị na-achịkọta ọkụ site na ebe ị họọrọ.
Ebe Dị Mkpa
Ọnọdụ bụ igodo maka foto zuru oke. Otu n’ime ihe dị ezigbo mkpa gbasara ebe dị mma bụ etu ọkụ dị. Ìhè na-enye ohere ka ogbugba gị nye echiche nke mmegharị, dịka ndị mmadụ na-aga ije, ebili mmiri na-akụda, ma ọ bụ igwe ojii na-agagharị. N'ihi na ogologo oge ikpughere ga-adị iche na otu ogbugba ahụ si dị ndụ n'ezie, inwe echiche doro anya bụ isi ihe ga-eme ka foto a ga-adị.
Ọtụtụ ndị na-ese foto na-ahọrọ obodo ogige ndị nwere nnukwu ọkụ na-esi n'ụgbọala na ụlọ. Nature bụ ebe ọzọ a na-ewu ewu, ebe ọkụ sitere n'okike nke kpakpando n'abalị na-enye ohere ohere ịgba ogologo ogologo. Ọ dị ezigbo mkpa ịga ebe ahụ tupu oge foto gị, ebe ọ bụ na ịchọrọ iji uche okike gị kpebie otu ndị isi gị ga-esi kwaga mgbe a na-ese foto ahụ.
Jiri Nnukwu Nnukwu Nnyocha Gị Mgbe Photo Na-eme Foto Ngosipụta Ogologo
A-anọpụ iche njupụta nyo na-ekpebi otú ihe ìhè na-abanye igwefoto si oghere. Nke a bụ akụkụ dị oke egwu nke foto foto ogologo oge, ebe ọkụ bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke gbaa. Nke a dị mkpa karịsịa maka foto abalị na-ekpughere ogologo abalị, ebe ọ na-enye ohere obere ìhè n'ime oghere, na -emepụta ihe nkiri na-akpali akpali. Site na ịgbakwunye ihe nyocha ND gị na oghere gị, ị nwere ike ịchịkwa oke ala ole na igwefoto igwefoto gị, na n'ikpeazụ, otu ogbugba gị si ele anya.
Otu n'ime ndị a bụ nzacha nke pịrị apị nke gụsịrị akwụkwọ, nke na-eme dị ka grajentị etinyegoro na enyo gị, na otu akụkụ na-ahapụ ọtụtụ ọkụ ka onye ọzọ jiri nwayọ na-ahapụ obere ọkụ pere mpe ga na igwefoto igwefoto gị. Enwere ike iji nke a jiri nwayọ nwayọ nke ọnọdụ wee gbakwunye mgbanwe dị ọcha na foto gị. Maka ọtụtụ ndị na - ese foto novice, nzacha na - anọpụ iche nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ, ya mere, enwere ụfọdụ aghụghọ iji mee ka njupụta nke ndọtị ND nyere.
Otu n'ime ụzọ ndị kachasị ewu ewu iji nweta mgbatị ahụ zuru oke na-enweghị nyocha ND bụ iji bulie ọsọ ọsọ igwefoto site na itinye ya n'otu ntọala ya kachasị ala. Nke a na-enye ohere foto iji nweta otu mmetụta na-enweghị price mkpado nke a iyo.
Gbado anya n’isiokwu ahụ ma see foto a
N'ikpeazụ, oge eruola ịse foto. Yourse foto gị bụ ụdị nka n'onwe ya, ebe ọ na-achọ oge zuru oke na igwefoto iji mee ka ọ dị mma. Mgbe ịtọsịrị igwefoto gị na njem njem ahụ ma lekwasị anya na isiokwu gị, oge eruola ka ịtọgharịa ntọala igwefoto gị maka ogbugba zuru oke.
Mgbe ị na-ese foto, ọ dị mkpa iji hụ na mkpuchi igwefoto gị dị na ọsọ ọsọ. Mgbe ị na-ese foto, ịnwere ike iji autofocus igwefoto gị ma ọ bụ ọnọdụ aka. Agbanyeghị, ọ dị mkpa na ọ bụrụ na ịhọrọ iji ọnọdụ aka, ị gbanwee mgbanaka elekere gị ka mgbanaka ahụ dị nkọ ma doo anya.
Ihe ukwu banyere foto ogologo ikpughere bụ na ị nwere ike iji igwefoto igwefoto gị na ntuziaka aka gị mgbe ị na-agbapụ ya. Bido site na itinye igwefoto gị na autofocus, mgbe ahụ, kpoo bọtịnụ ihu igwefoto gị na ọkara, wee gbanwee gaa na ntuziaka. Usoro a ka ọtụtụ ndị na-ese foto na-eji, ebe ọ na-enye gị ohere ijigide nlezianya anya ma doo anya, nke nwere ike ịbụ ihe ịma aka na ọnọdụ ntuziaka naanị.
Ma ọ bụ obodo na-ekwo ekwo ma ọ bụ obodo na-ekwo ekwo, ị maara na foto gị nwere ike ịmasị gị. Agbanyeghị, enwere usoro ọzọ iji tọọ. Ọtụtụ mgbe, igwefoto gị ga-enye gị ohere ijide bọtịnụ mkpuchi maka sekọnd iri atọ. Agbanyeghị, site na ịgbanwere "ọnọdụ bọlbụ", enweghị oke oge ole enwere ike ịkwanye ihe mkpuchi ahụ. Echefula, jiri uche gị mee ihe ngosi n'ezie maka otu foto gị ga-esi pụta.
Ogologo oge ikpughe foto bụ ụzọ dị mma iji gosipụta ọmarịcha nka gị. Ọ na - enye gị ohere ịnụ ụtọ ma kwado mmekọrịta gị na ọnọdụ gị. Nke kachasị, ọ dị mkpa ịnụ ụtọ ahụmịhe ahụ ma nwee ọ ,ụ, ebe ọ bụ na ịse foto bụ ụzọ dị mma iji zuru ike ma nwee ọpụpụ!
5 Parallax Effective iPhone ngwa iji bulite foto gị →← Ndị na-emepụta ihe kacha mma 5 GIF